Garandi - Beijing Zohonice Runako Equipment Co., Ltd.
1. Basa Rekuchengetedza
(1) Guarantee: Nemakore 1 kubva pazuva rawakatenga chigadzirwa, kana paine chero mhosva, isu tinopa yemahara yekuchengetedza sevhisi.
(2) Kana iwe uine chero matambudziko paunenge uchishandisa zvigadzirwa zvedu, ndapota taura nesu nefoni, Fax, Skype, WhatsApp, Viber kana e-mail uye isu tichapindura mukati meawa rimwe uye kugadzirisa matambudziko ako nekukurumidza sezvazvinogona.
(3) Tinotora mhando yezvigadzirwa zvedu pasi pekushandisa kwese. Kana inomiririra default, isu tinopa yemahara kuchengetedza. Mushure menguva yewarandi, isu tinongobhadharisa mutengo wemutengo wezvipenga zvikamu. Unyanzvi hwehunyanzvi hwakasununguka kweupenyu hwese.
(1) Kudzidziswa kwehunyanzvi:
Pachave neanoshandisa mushandisi kana vhidhiyo iyo inokubatsira iwe kudzidza muchina, maitiro ekuisa, maitiro ekushandisa, maitiro ekugadzirisa muchina, uyezve, pachave neanotengesa-kutengesa timu timu ichipa maawa makumi maviri nemaviri 'online sevhisi.
(2) Kliniki kudzidziswa:
Zohonice runako rwekudzidzisa nzvimbo rakagadzwa rekushanyira vatengi. Iwe unogona kuwana nyanzvi yekurovedza kiriniki giraidhi kubva kuna Chiremba kana vagadziri, iwe unogona zvakare kutora ichi kudzidziswa kuburikidza neE-mail, foni uye zvishandiso zvepamhepo, nezvimwe.